Ubushushu kunye nokuvavanywa kokufuma kwebhayisikile- Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Ubushushu kunye novavanyo lokuhamba ngebhayisikile lusetyenziselwa ukuvavanya nokumisela iiparameter kunye nokusebenza kweemveliso okanye izinto ngotshintsho lobushushu kunye nokufuma njengaphantsi kobushushu obuphezulu kunye nokufuma okanye ubushushu obuphantsi kunye nokufuma.
Utshintsho kwindalo esingqongileyo kwizinto ezinje ngeqondo lobushushu kunye nokufuma kunempembelelo enkulu kwizinto eziphathekayo nakwimveliso yokusebenza. Silwenza kwangaphambili olu vavanyo ngokuntywilisela iimveliso okanye izinto ezikwindawo yokufakelwa, sibhengeza iimveliso kubushushu obuphezulu kakhulu, ngokuthe ngcembe sinciphise ubushushu obuphantsi, emva koko sibuyele kubushushu obuphezulu. Lo mjikelo unokuphindwa kwimeko yovavanyo lokuthembeka okanye iimfuno zabathengi.
-FTTH Ifayibha optic yokulahla intambo
Izihlanganisi zokugqobhoza indawo yokungena ngaphakathi kwi-IPC
-FTTH yokulahla intambo yamasango
Izibambiso zasemoyeni okanye izixhasi zokulungisa
-ABS cable uqinisa
Uvavanyo oluqhelekileyo lwemigangatho lubhekisa kwi-IEC 60794-4-22, EN-50483: 4, NFC-33-020, NFC-33-040.
Sithengisa iimveliso kumazwe angaphezu kwama-40 emhlabeni, amanye amazwe aneqondo lobushushu eliphezulu kakhulu okanye eliphantsi, njengeKuwait neRashiya. Kwakhona amanye amazwe aneemvula eziqhubekayo kunye nokufuma okuphezulu njengePhilippines. Kufuneka siqiniseke ukuba iimveliso zethu zinokusetyenziswa kwiimeko ezahlukeneyo zemozulu kwaye olu vavanyo lunokuba luvavanyo olulungileyo ekusebenzeni kweemveliso.
Igumbi lokuvavanya lilinganisa iimeko zemozulu ezahlukeneyo, uluhlu lobushushu oluguquguqukayo lwezixhobo yi-70 ℃ ~ -40 ℃ kwaye ukufuma kuluhlu yi-0% ~ 100%, egubungela uninzi lwendalo esingqongileyo. Siyakwazi ukulawula izinga lokushisa okanye ukunyuka nokunyuka komswakama. Imfuno yovavanyo lobushushu okanye ukufuma inokumiselwa kwangaphambili ukuthintela impazamo yomntu kunye nokuqinisekisa ubunyani kunye nokuchaneka kolu vavanyo.
Senza olu vavanyo kwiimveliso ezintsha ngaphambi kokumiliselwa, kwanolawulo lomgangatho wemihla ngemihla.